सर्वश्रेष्ठ माइक्रोनाइज्ड Palmitoylethanolamide पाउडर निर्माता
Cofttek चीन मा सबै भन्दा राम्रो Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर निर्माता हो। हाम्रो कारखाना एक पूरा उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (ISO9001 र ISO14001), 3200kg को एक मासिक उत्पादन क्षमता संग छ।
Palmitoylethanolamide पाउडर भिडियो
Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर Specifications
नाम: Palmitoylethanolamide (PEA)
शुद्धता %%% माइक्रोनाइज्ड PEA ；%%% पाउडर
आणविक फार्मूला: C18H37NO2
आणविक वजन: 299.49 जी / mol
पिघल प्वाइन्ट: 93 देखि 98 ° C
रासायनिक नाम: हाइड्रोक्सिथ्याल्पिल्माटामाइड पामिड्रोल एन-पाल्मिटोलेलेथोलामाइन पाल्मिथिलेथोलामाइड
एन- (२-हाइड्रोक्साइथाइल) हेक्साडेकानिमाइड
InChI कुञ्जी: HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
आधा जीवन: 8 घण्टा
आवेदन: Palmitoylethanolamide (PEA) endocannabinoid परिवार, फ्याट्टी एसिड एमाइडहरूको एक समूहको हो। पीईए एनाल्जेसिक र एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गतिविधि भएको प्रमाणित भएको छ र विभिन्न अन्तर्निहित क्लिनिकल अवस्थाहरू भएका वयस्क बिरामीहरूमा दीर्घकालीन पीडाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित धेरै नियन्त्रणित अध्ययनहरूमा प्रयोग गरिएको छ।
Palmitoylethanolamide (544 31--0१-०) NMR स्पेक्ट्रम
Palmitoylethanolamide एक endogenic फैटी एसिड एमाइड हो कि आणविक कारक Agonists को वर्ग अन्तर्गत पर्छ। यो स्वाभाविक रूप मा सोयाबीन, लेसिथिन मूंगफली, र मानव शरीर को रूप मा खाद्य पदार्थ मा हुन्छ।
Palmitoylethanolamide पहिलो पटक प्रारम्भिक 1940s मा खोजिएको थियो। वैज्ञानिकहरूले सबैभन्दा पहिले पत्ता लगाए कि पाउडर अण्डाको जर्दी को उपभोगले बच्चाहरु मा एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया लाई बढावा दियो र गठिया ज्वरो को विकास को जोखिम कम भयो। थप अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ कि अण्डाको जर्दीमा एक विशेष यौगिक अर्थात PEA हुन्छ। पीईए मूंगफली र सोयाबीन जस्ता सम्पूर्ण खाद्य पदार्थहरुमा पाईएको छ, जसले बलियो प्रतिरक्षा र स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
केहि खानाहरु मा पाइने को अलावा, PEA पनि स्वाभाविक रूप देखि हाम्रो शरीर मा घटित हुन्छ। रसायन हाम्रो शरीर मा एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को एक भाग को रूप मा हाम्रा धेरै कोषहरु द्वारा उत्पादन गरिन्छ। पीईए विशेष गरी सूजन को प्रतिक्रिया मा हाम्रो शरीर द्वारा बनाईएको हो। यो हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली लाई overreacting बाट बचाएर शरीर मा हाम्रो दुखाइ को प्रबंधन गर्न को लागी जानिन्छ र यो एक स्वस्थ प्रतिरक्षा र शरीर मा भडकाउने प्रतिक्रिया लाई बढावा दिन्छ।
Palmitoylethanolamide पाउडर ज्यादातर दुखाइ, fibromyalgia, न्यूरोपैथिक दुखाइ, एकाधिक काठिन्य, कार्पल सुरंग सिंड्रोम, र धेरै अन्य शर्तहरु को लागी एक औषधि को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
Palmitoylethanolamide र क्यानाबिनोइड परिवार
Palmitoylethanolamide जरूरी भांग बाट आउँदैन तर cannabinoid परिवार को हिस्सा मान्न सकिन्छ। PEA CBD (cannabidiol) को एक धेरै समान तरीका मा काम गर्दछ, जो भांग मा मुख्य यौगिकहरु मध्ये एक हो तर यो psychogenic प्रभाव छैन। सीबीडी उत्पादनहरु यी दिनहरु धेरै लोकप्रिय छन् र तेल देखि क्रीम, र खाद्य उत्पादनहरु को लागी लगभग सबै कुरा मा उपलब्ध छन्। सीबीडी उत्पादनहरु पनि मानसिक, तंत्रिका, र संयुक्त स्वास्थ्य सहित धेरै सम्भावित स्वास्थ्य लाभहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ।
पीईए एक क्यानाबिनोइड पनि हो, तर यो एक को रूप मा विश्लेषण गरीन्छ एन्डोcannabinoid यो शरीर भित्र बनाइएको छ। जे होस्, यो cannabidiol र tetrahydrocannabinol बाट फरक छ किनकि शरीर स्वाभाविक रूप बाट यी रसायनहरु बनाउँदैन।
Palmitoylethanolamide बोसो जलाउने, ऊर्जा बढाउने, र विरोधी भडकाऊ PPAR अल्फा ट्रिगर। जब यी प्रमुख प्रोटीन सक्रिय हुन्छन्, PEA सूजन को बढावा दिन को लागी सक्षम जीन को कार्य रोक्छ र धेरै भड़काउने पदार्थ को उत्पादन कम गर्दछ। पीईए जीन FAAH को गतिविधि लाई कम गर्दछ कि प्राकृतिक cannabinoid anandamide लाई तोड्छ र शरीर मा anandamide को स्तर लाई अधिकतम गर्दछ। Anandamide तपाइँको दुखाइ कम गर्न को लागी जिम्मेवार छ, तपाइँको दिमाग शान्त, र तपाइँको शरीर मा विश्राम को बढावा।
पीईए शरीर को कोशिकाहरु लाई बाँध्न र दुखाइ र सूजन लाई कम गर्न को लागी जानिन्छ। यो यसको संरचना मा palmitic एसिड, जो शरीर मा शरीर मा Palmitoylethanolamide बनाउन मद्दत गर्दछ।
केहि वैज्ञानिकहरु को अनुसार, केवल palmitic एसिड को आफ्नो सेवन PEA उत्पादन लाई असर गर्दैन। यो हो किनभने तपाइँको शरीर मात्र तपाइँको शरीर मा पीईए को उपयोग गर्दछ जब यो तपाइँको सूजन वा दुखाई निको गर्न को लागी आवश्यक छ। यो शरीर मा PEA को स्तर मा परिणाम सामान्यतया दिन भर फरक हुन्छ।
PEA को लाभ प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका PEA युक्त खाद्य पदार्थ वा मानकीकृत पूरक उपभोग गरेर हो।
Palmitoylethanolamide पाउडर लाभ र अनुप्रयोगहरु
पीईए पीडा-राहत र विरोधी भड़काऊ गुण छ साबित भएको छ र धेरै अन्तर्निहित क्लिनिकल अवस्थाहरु संग वयस्कों को बीच पुरानो दुखाइ को प्रबंधन को लागी प्रयोग गरीएको छ। उदाहरण को लागी, यो पुराना बिरामीहरु मा कम पीडा को दुखाइ को उपचार को लागी सहायक जस्तै एक सहायक प्रभाव प्रदान गर्न सक्छ वा परम्परागत एनाल्जेसिक जो प्रतिकूल प्रभाव को एक उच्च जोखिम छ को ठाउँ मा गंभीर बिरामी बिरामीहरु मा पुरानो दुखाइ व्यवस्थापन को लागी एक्लै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पीईए को एक अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड सूत्रीकरण र अल्फा- lipoic एसिड संग संयोजन थेरापी क्रोनिक prostatitis/क्रोनिक पेल्विक दुखाइ सिंड्रोम लाई कम गर्न को लागी गैर शल्य चिकित्सा radiculopathies को उपचार मा आशाजनक परिणाम प्रदर्शन गरीएको छ।
तल PEA को केहि महान लाभहरु छन्:
· पिडाबाट राहत
त्यहाँ केहि प्रमाण छ कि पीईए को गम्भीर दुखाइ कम गर्ने क्षमता लाई मान्य गर्दछ. PEA thousand हजार मानिसहरु र १०० को दशक देखि ३० क्लिनिकल परीक्षणहरुमा अनुसन्धान गरीएको छ। जे होस्, अध्ययन अक्सर न्यूरोपैथिक र गैर न्यूरोपैथिक दुखाइ को बीच भेद गर्न असफल भएको छ। को को लाभहरु Palmitoylethanolamide न्यूरोपैथिक दुखाइ को लागी कम स्पष्ट जानकारी को लागी मिति सम्म कम स्पष्ट छन्।
अर्को प्रतिबन्ध यो थियो कि यी अध्ययनहरु मध्ये धेरै एक प्लेसबो नियन्त्रण को अभाव छ र उच्च गुणस्तर को अनुसन्धान को लागी पीईए को प्रभाव को बिभिन्न प्रकार को राहत मा निर्णय गर्न को लागी आवश्यक छ।
१२ मानव अध्ययन को एक सर्वेक्षण मा, पीईए पूरक कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट बिना पुरानो र न्यूरोपैथिक दुखाइ शक्ति को कमी मा प्रभावकारिता देखाईयो। ती १२ व्यक्तिहरु लाई सामान्यतया ३ देखि weeks हप्ता को लागी २०० देखि १२०० मिलीग्राम/दिन को बीच खुराक संग पीईए पूरक दिइएको थियो। पूरक दुखाई मुक्त राज्य प्राप्त गर्न को बारे मा दुई हप्ता लाग्यो। कुनै पनी लामो अवधिको लागी यो लिईरहेको कुनैपनि प्रतिकूल प्रभावहरु को कारण बिना यसको प्रभाव पोषण।
पीईए को ३०० वा mg०० मिलीग्राम/दिन संगै गरिएको अर्को अध्ययन 300०० भन्दा बढी मानिसहरुको निर्णायक परीक्षण मा कटिस्नायु दुखाइ मा एक बलियो कमी देखाइयो। पीईए ले ३ हप्तामा ५०% भन्दा बढी दुखाइ कम गर्यो, जुन धेरै दुखाई निवारकहरु संगै हासिल गर्न सकिन्छ।
· मस्तिष्क स्वास्थ्य र पुनर्जनन
PEA पनि neurodegenerative रोगहरु र स्ट्रोक को लागी लाभदायक हुन जानिन्छ। पूरक मस्तिष्क को कोशिकाहरु लाई बाँच्न र कम सूजन को मद्दत बाट मस्तिष्क प्रकार्य मा सुधार गर्न को लागी मानिन्छ।
250 स्ट्रोक बिरामीहरु को एक अध्ययन मा, luteolin संग PEA को एक सूत्रीकरण सुधारिएको रिकभरी को संकेत देखायो। यो पनि राम्रो मस्तिष्क स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक कौशल, र दैनिक मस्तिष्क को काम मा एक लाभदायक प्रभाव को घोषणा गरीएको छ। प्रभाव पूरक को 30 दिन पछि ध्यान देने योग्य थिए र जब पूरक को दुई महिना पछि, अधिक सुधार देखीयो।
दुबै luteolin र एक्लै संग, PEA luteolin संग प्रयोग गर्दा चूहों मा पार्किन्सन रोग लाई रोक्न को लागी देखिएको थियो। यो डोपामाइन न्यूरन्स को रक्षा गरेर मस्तिष्क मा क्षति कम गर्दछ। जे होस्, मानक क्लिनिकल अध्ययन यी निष्कर्षहरु प्रमाणित गर्न को लागी आवश्यक छ।
एक अन्य अध्ययनले देखायो कि luteolin संग पीईए BDNF र NGF जस्तै सानो शक्तिशाली प्रोटीन नयाँ मस्तिष्क को कोशिकाहरु बनाउन को लागी उपयोगी छन् जस्तै न्यूरोट्रॉफिक कारकहरु लाई बढाउन मा मद्दत गरीयो। यो मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी वा मस्तिष्क को कष्टदायक क्षति पछि नयाँ कोषहरु र ऊतकहरु लाई पुनर्जीवित गर्न को क्षमता लाई बढायो। जब पीईए luteolin संग चूहों मा प्रयोग गरीयो यो रीढ़ को हड्डी को चोट संग चूहों मा तंत्रिका को उपचार बढायो।
PEA मा cannabinoids को प्राकृतिक घटना को कारण, प्रभावहरु बिरामीहरु को व्यवहार, मूड मा एक वृद्धि देखाइयो। यसले मुसाहरुमा घटेको जोखिम घटाएको छ। जे होस्, बरामदगी मा यसको प्रभाव अझै मानव मा अनुसन्धान गरीएको छ र थप अध्ययन यो प्रमाणित गर्न को लागी आवश्यक छ।
· मुटु मा प्रभाव
मुटु को दिशा मा रक्त वाहिकाहरु को अवरोध को परिणाम को रूप मा एक हृदयघात हुन्छ। पीईए मुटु को ऊतक को क्षति को निको पार्न र मुटु को रगत को प्रवाह जो दिल को दौरा को मामलाहरु लाई कम गर्न मा मद्दत गर्दछ बृद्धि गर्न जानिन्छ। चूहों मा एक अध्ययन पनि हृदय मा भडकाउने साइटोकिन स्तर को कम देखीएको छ।
PEA को प्रयोगले मुसाहरुमा उच्च रक्तचाप को स्तर लाई कम गर्दछ र भड्काउने पदार्थहरु लाई कम गरेर गुर्दे को क्षति लाई रोक्छ। रक्त वाहिकाहरु लाई संकुचित गरेर, पीईए एन्जाइम र रिसेप्टर्स कि रक्तचाप बढाउन को लागी प्रभावी थियो।
· अवसाद को लक्षण
एक भर्खरको अध्ययन मा, अवसाद बाट पीडित 58 मानिसहरु PEA संग उपचार गरीएको थियो। बिरामीहरुलाई weeks हप्ता भन्दा बढि दिन प्रति दिन १.२ ग्राम को खुराक दिइयो। यो मूड र समग्र लक्षण को छिटो सुधार मा परिणाम। पीईए जब antidepressant उपाय अर्थात् citalopram, एक मानक ५०%द्वारा अवसाद को लक्षण कम गर्न को लागी जोडिएको।
· सामान्य चिसो को लक्षण
अर्को अध्ययनले पीईए लाई इन्फ्लुएन्जा भाइरस संग लड्न को लागी एक प्रभावी उपाय हो भनेर देखायो जसले सामान्य चिसो पैदा गर्दछ। ४ हजार भन्दा धेरै मानिसहरु को केहि प्रारम्भिक सर्वेक्षण मा, पीईए प्रतिरक्षा मा एक सकारात्मक प्रभाव प्रकट गर्न र बिरामीहरुमा फ्लू जस्तै लक्षणहरु लाई कम गर्न मा मद्दत गर्न सक्षम थियो।
अर्को अध्ययनमा 900 ०० जवान सिपाहीहरुलाई १,२०० मिलीग्राम पीईए दिइएको थियो जसले चिसो र घाँटी दुख्ने, नाक बग्ने, ज्वरो र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरु लाई निको पार्छ।
· पेटको सूजन
पछिल्लो तर कम से कम पीईए सफलतापूर्वक जनावरहरु मा भड्काउने आंत्र रोग (आईबीएस) को संकेत लाई पुनर्जीवित गर्न को लागी प्रयोग गरीएको थियो। PEA पूरक जब पुरानो पेट को सूजन संग चूहों मा परीक्षण, आन्दोलन को सामान्यीकरण मा मद्दत गरीयो र प्रभावी ढंग बाट पेट को अस्तर लाई क्षति रोक्न।
पेट को क्षति वा सूजन अल्सरेटिभ कोलाइटिस को कारण हो जो क्यान्सर को जोखिम को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। PEA को उपयोग चूहों मा क्यान्सर अतिवृद्धि लाई बढावा दिन बाट सामान्य पेट को ऊतक बन्द भयो। पीईए भडकाउने साइटोकिन्स र न्यूट्रोफिल र प्रतिरक्षा कोषहरु को वृद्धि लाई कम गर्दछ जसले पेट को क्षति को लक्षणहरु लाई तीव्र बनाउँछ।
Palmitoylethanolamide खाद्य स्रोतहरु
जे होस् पीईए एक संतृप्त फैटी एसिड हो, तपाइँको आहार मा अधिक संतृप्त बोसो सहित राम्रो भन्दा बढी हानि गर्दछ। संतृप्त बोसो मा उच्च खाद्य पदार्थ को उपभोग तपाइँको शरीर को पीईए उत्पादन बृद्धि गर्नुको सट्टा विभिन्न पुरानो र भडकाऊ रोगहरु को विकास को तपाइँको जोखिम मा वृद्धि हुनेछ।
सोया उत्पादनहरु, सोया लेसिथिन, मूंगफली, र अल्फाल्फा जस्तै खाद्य पदार्थ PEA को केहि महान स्रोतहरु हुन्। अखरोट एलर्जी संग मानिसहरु जरूरी मूंगफली छोड्न र अन्य खाद्य पदार्थ उपभोग गर्नुपर्छ। अण्डाको जर्दी अर्को राम्रो स्रोत हो र मानिसहरु जो अण्डा को लागी संवेदनशीलता छैन द्वारा उपभोग गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताहरु लाई पीईए पूरकहरु लाई लिन को रूप मा उनीहरु एक सुरक्षित र एक प्रभावी छनौट को बारे मा सोच्न सक्छन्।
पीईए पूरक खुराक र सुरक्षा
क्लिनिकल अध्ययन को अनुसार, कम से कम 600 मिलीग्राम/दिन को तंत्रिका दुखाइ को राहत को लागी आवश्यक हुन सक्छ, र 1.2 जी/दिन को खुराक मधुमेह तंत्रिका दुखाइ को उपचार को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आँखा को समस्या बाट पीडित मधुमेह रोगीहरु को लागी, १. 1.8 g/दिन सम्म खुराक आँखा को तंत्रिका को क्षति कम गर्न को लागी प्रभावकारी थियो।
सामान्य चिसो को उपचार को लागी, पीईए को 1.2 जी/दिन मानक खुराक थियो।
पीईए को पूरक लिनु भन्दा पहिले तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्नुहोस् पीईए एफडीए द्वारा अनुमोदित गरीएको छैन ठूलो खुराक मा लिन को लागी।
Palmitoylethanolamide पाउडर वा सानो, सीमित खुराक मा पूरक को उपभोग सामान्यतया सुरक्षित मानिन्छ। जे होस्, अधिक उन्नत क्लिनिकल अध्ययन उच्च खुराक को लागी आवश्यक छ। लामो अवधिको पीईए पूरकता पनि केहि साना स्केल अध्ययन अनुसार सुरक्षित हुन जानिन्छ।
PEA निर्माता कारखाना बाट केहि निर्माताहरु कुल खुराक दुई भाग मा विभाजित र दिन को समयमा यो उपभोग गर्न को लागी सिफारिश गर्दछ। केहि अवस्थामा, माइक्रोनाइज्ड पीईए, जो साधारण शब्दहरुमा ठीक palmitoylethanolamide पाउडर हो, शरीर मा राम्रो संग अवशोषित गर्न को लागी जानिन्छ र वैज्ञानिकहरु पाउडर को रूप मा अन्य रूपहरु लाई श्रेष्ठ मान्छन्।
PEA साइड इफेक्ट
Palmitoylethanolamide को मौखिक खपत सामान्यतया धेरै वयस्कों को लागी सुरक्षित मानिन्छ जब3महिना सम्म को लागी प्रयोग गरीन्छ। मिति सम्म, कुनै गम्भीर जटिलताहरु वा औषधि-देखि-औषधि अन्तरक्रिया पहिचान गरिएको छ। जे होस्, त्यहाँ पर्याप्त जानकारी छैन कि औषधि सुरक्षित हुन सक्छ जब तीन महिना भन्दा लामो को लागी प्रयोग गरीन्छ। साइड इफेक्ट एक परेशान पेट, जो धेरै दुर्लभ छ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
स्पष्ट हुन को लागी, पीईए माथिको कुनै पनी अध्ययन मा कुनै गम्भीर जटिलताहरु को कारण छैन तर यो अझै पनी उचित सुरक्षा अध्ययन को अभाव छ। साथै, त्यहाँ पीडा को यी प्रकार संग बिरामीहरु मा पीईए को प्रभावकारिता को मात्रा आंकडा अपर्याप्त प्रमाण छ।
गर्भावस्था र बच्चाहरु
पीईए सामान्यतया वयस्कहरु को उपयोग को लागी सुरक्षित मानिन्छ र अध्ययन को एक जोडी पनि बच्चाहरु मा कुनै जोखिम को लागी कम देखीएको छ। तर ठूलो अध्ययन बच्चाहरु मा पीईए को सुरक्षा प्रमाणित गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। पर्याप्त क्लिनिकल डाटा को कमी को कारण, गर्भवती र स्तनपान महिलाहरु लाई एक सावधानी को पालन गर्न को लागी र कुनै पनि PEA पूरक लिनु भन्दा पहिले एक डाक्टर संग परामर्श गर्न को लागी सुझाव दिईन्छ।
PEA लाई धेरै प्रतिकूल प्रभाव र दुखाइ कम भएको छ जबकि जीवन को गुणस्तर मा सुधार। यसको अध्ययन सुरक्षा र फैटी एसिड को दक्षता को समर्थन र पीईए को क्लिनिकल उपयोग मा सुरक्षित सिफारिश गरीन्छ। पूरक कार्पल सुरंग सिन्ड्रोम र sciatic दुखाइ सहित सम्पीडन सिन्ड्रोम को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी छ। PEA पूरकता लिन को लागी पनि सजिलो छ र मौखिक रूपमा प्रशासित गर्न सकिन्छ।
कुनै पनी पीईए पूरक लिनु भन्दा पहिले एक डाक्टर संग परामर्श गर्न को लागी याद गर्नुहोस् पीईए को उच्च खुराक को रूप मा केहि जटिलताहरु को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। जे होस् जटिलताहरु मुख्य रूप मा हल्का र गम्भीर छैन, पीईए अनुमोदित चिकित्सा उपचार को लागी एक विकल्प को रूप मा प्रयोग गर्नु हुदैन। जे होस्, माथिको वर्णन लाभ र अध्ययन ज्यादातर जनावरहरु र कोषहरु मा आयोजित गरीएको थियो। स्थिर क्लिनिकल प्रमाण अझै अभाव छ।
मानव मा अधिक अध्ययन पेट स्वास्थ्य, मुटु, र histamine रिलीज मा पीईए को प्रभाव निर्धारण गर्न को लागी आवश्यक छ।
Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर बिक्री को लागी र जहाँ थोक मा Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर किन्न
हामी धेरै वर्षको लागि एक पेशेवर Palmitoylethanolamide (PEA) पाउडर आपूर्तिकर्ता हौं, हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यको साथ उत्पादनहरू आपूर्ति गर्दछौं, र हाम्रो उत्पादन उच्च गुणस्तरको छ र विश्वव्यापी उपभोगको लागि सुरक्षित छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न कडा, स्वतन्त्र परीक्षणको क्रममा छ।
Hansen HS। Palmitoylethanolamide र अन्य anandamide कन्जेनरहरु। बिरामी दिमागमा प्रस्तावित भूमिका। Exp न्युरोल। २०१०; २२2010 (१): ––-––
पेट्रोसिनो एस, Iuvone टी, डि मार्जो V. N- palmitoyl-इथेनोलामाइन: जैव रसायन र नयाँ उपचार अवसरहरू। बायोचिमी। २०१०; (२ ()): –२–-–
सेराटो एस, ब्राजिस पी, डेला भेले एमएफ, मियोलो ए, पुइगुडेन्ट ए Vet इम्यूनोल इम्यूनोपाथोल। २०१०; १2 (१): – -१।